Clockwise from top left: Cathedral of Christ the Saviour; Spasskaya Tower of the Moscow Kremlin; Moscow International Business Center; Red Square; Bolshoi Theatre; and Moscow State University.
သီချင်း: My Moscow
ကိုဩဒိနိတ်: 55°45′N 37°37′E﻿ / ﻿55°45′N 37°37′E﻿ / ﻿55.750; 37.617
Federal city ရက်စွဲ
၂,၅၁၁ km2 (၉၇၀ sq mi)
လူဦးရေ (2015 est.)
၁၂၁၉၇၅၉၆ (permanent residents within city limits)
၁၄,၃၀၀,၀၀၀ (estimated total within city limits)
Combined population of Moscow Federal City and Moscow Oblast is ၁၉,၅၆၁,၁၉၄
မော်စကိုမြို့ (/ or /; ရုရှား: Москва́, tr. မာစ်ကဗာ; IPA: [mɐˈskva] ( နားဆင်)) ရုရှားနိုင်ငံသည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်ကာ မြို့နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် နေထိုင်သူ ၁၃.၂ မီလီယံနေထိုင်ပြီး  မြို့ပြဧရိယာအတွင်းတွင် ၁၇.၁ မီလီယံ နေထိုင်ကြသည်။ မော်စကိုမြို့သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်မြို့တော်ဟူသော ဝိသေသထူးဖြင့်လည်း ချီးမြှင့်ထားသော မြို့လည်းဖြစ်သည်။
မော်စကိုသည် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် အရှေ့ဥရောပ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သိပ္ပံပညာရပ်များထွန်းကာစည်ပင်ရာ ဗဟိုချက်မဖြစ်ပြီး ဥရောပကုန်းမြေတွင် အကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်သည်။ နယ်နိမိတ်မျဉ်းများအရ မော်စကိုသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြို့များထဲတွင် ပါဝင်ပြီး ၁၄ ခုမြောက် အကြီးဆုံးမီသရိုဧရိယာ(metro area)ရှိသည်။ ထို့ပြင် မြို့ပြတည်နေရာအတွင်း လူဦးရေထူထပ်မှုတွင် အဆင့် ၁၈ တွင် တည်ရှိနေပြီး ၁၄ ခုမြောက် အကြီးဆုံးသော မြို့ပြဧရိယာ(urban area)ပိုင်ဆိုင်ထားသော မြို့လည်း ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်နိမိတ်အတွင်း လူဦးများပြားမှုတွင် အဆင့် ၁၁ တွင် တည်ရှိနေသည်။ ဖို့စ် ၂၀၁၃ အရ မော်စကိုသည် Mercer ၏ နေထိုင်မှုစရိတ်မြှင့်မားသော မြို့များစာရင်းတွင် အဆင့် ၉ ၌ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး Alpha global city ၏ Globalization and World Cities Research Network အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ အကြီးဆုံးသော မြို့ပြ စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်သော မြို့များထဲမှ တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ MasterCard Global Destination Cities Index အရ ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်မှု အလျင်အမြန်ဆုံး တိုးတက်လာခဲ့သော မြို့များထဲမှ တစ်မြို့အဖြစ် မော်စကိုမြို့သည် ပါဝင်ခဲ့လေသည်။
ဤမြေကမ္ဘာပေါ်တွင် မော်စကိုသည် မြောက်ဘက်အစွန်းဆုံးနှင့် အအေးဆုံး မီဂါစီးတီးနှင့် မီသရိုပူလစ် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုပြင် မော်စကိုမြို့သည် ဥရောပ၏ အမြင့်ဆုံးသော အထောက်အကူမဲ့ ထီးထီးရှိနေသော အဆောက်အဦဖြစ်သည့် အာစတန်ကီနိုတာဝါ၊ ဥရောပ၏ အမြင့်ဆုံးသော မိုးမျှော်အဆောက်အဦဖြစ်သော ဖက်ဒရေးရှင်းတာဝါနှင့် မော်စကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးစင်တာတို့တည်ရှိရာ မြေဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မော်စကို အော့ဗလတ်၏ အနောက်တောင်ဘက်သို့ မြို့တော်နယ်နိမိတ်ကို ချဲ့ထွင်ရာ မြို့၏ ဧရိယာမှာ ၁,၀၉၁ to ၂,၅၁၁ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၄၂၁ to ၉၇၀ စတုရန်းမိုင်)လောက်ထိ နှစ်ဆမျှ ကျယ်သွားခဲ့ပြီး လူဦးရေ ၂၃၃,၀၀၀ မျှ နေထိုင်နိုင်စေခဲ့သည်။
မော်စကိုမြစ်ပေါ်တွင် တည်ရှိသော မော်စကိုမြို့သည် ဥရောပရုရှား၏ ဗဟိုဖက်ဒရယ်ခရိုင်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောပြီး ဥရောပ၏ ကုန်းတွင်းပိုင်း လူဦးရေစည်ပင်ပွားများဆုံးသော မြို့ဖြစ်သည်။ တောက်ပနေသော ရောင်စုံအမိုးခုံးများရှိသည့် စိန့်ဘာစီလ်ကာသီဒရယ်ကဲ့သို့သော သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများရှိသော မော်စကိုမြို့၏ ဗိသုကာလက်ရာများသည်လည်း ထင်ရှားကျော်ကြားကြသည်။ မြို့နယ်နိမတ်အတွင်း မြို့ပြဧရိယာတွင် ကြီးမားသော တောအုပ်များရှိပြီး မြို့၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် သစ်ပင်စိမ်းများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေသော မော်စကိုမြို့သည် ဥရောပနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစိမ်းရောင်ဖုံးလွှမ်းမှုအများဆုံးသော အဓိကမြို့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်စကိုမြို့သည် အလယ်ခေတ် မော်စကိုနယ်စားကြီးခေတ်မှသည် ဇာဘုရင်ခေတ် ရုရှားပြည်၊ ထိုမှသည် ရုရှားအင်ပါယာ၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၊ နောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံရောက်သည်ထိတိုင် အမည်များသာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သော နိုင်ငံတော်၏ မြို့တော်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
မော်စကိုသည် ရုရှားအစိုးရ ရုံးစိုက်ရာနေရာဖြစ်ပြီး အလယ်ခေတ်တွင် မြို့ရိုးခံတပ်ဖြစ်ခဲ့သော မော်စကိုကရင်မလင်သည် ယနေ့ခေတ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ အလုပ်လုပ်ရန် နေထိုင်သော နေရာဖြစ်လေသည်။ မော်စကိုကရင်မလင်နှင့် ရင်ပြင်နီတို့သည် မြို့တော်အတွင်းရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများထဲတွင် ပါဝင်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြသည်။ ရုရှားပါလီမန်များဖြစ်ကြသော ဒူးမားလွှတ်တော်နှင့် ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ တို့၏ လွှတ်တော်ခန်းမများသည်လည်း မြို့တော်အတွင်းတွင်ပင် တည်ရှိကြသည်။ မော်စကိုတွင် ပြတိုက်များ၊ အကယ်ဒမစ်ကျောင်းများ၊ နိုင်ငံရေးအင်စတီကျူးရှင်းများနှင့် ပြဇတ်ရုံများတည်ရှိသော ရုရှားအနုပညာရှင်များ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ အားကစားသမားများရှိရာ မော်စကိုအား ရုရှားနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုဌာနအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပေသည်။
မြို့တော်၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ၄ ခု၊ မီးရထားဘူတာရုံ ၉ ခု၊ များလှစွာသော ဓာတ်ရထားများ၊ Moscow Monorail နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အနက်ရှိုင်းဆုံးသော မြေအောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော မော်စကိုမီသရိုတို့ပါဝင်ပြီး မော်စကိုမီသရိုမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးကွန်ယက်ဖြစ်ပေသည်။ မော်စကိုမီသရိုသည် ဘူတာရုံပေါင်း ၂၀၀ ခန့်ရှိပြီး ဗိသုကာမြောက်လက်ရာများကြောင့် မြို့တော်၏ အရေးပါသောအမှတ်အသားတခုကဲ့သို့ ဆိုနိုင်ပေသည်။
၂.၂ အစောပိုင်း သမိုင်းမှတ်တမ်း (၁၁၄၇–၁၂၈၃)
၂.၃ နယ်စားကြီးများ အုပ်ချုပ်ရာကာလ (၁၂၈၃–၁၅၄၇)
၂.၄ ဇာဘုရင်ခေတ် (၁၅၄၇–၁၇၂၁)
၂.၅ အင်ပါယာခေတ် (၁၇၂၁–၁၉၁၇)
၂.၆ ဆိုဗီယက်ခေတ် (၁၉၁၇–၁၉၉၁)
၂.၇ မျက်မှောက်ခေတ် (၁၉၉၁–ယနေ့ခေတ်)
၇ စိတ်အပန်းဖြေ ဖျော်ဖြေရေးများ